OLOMPIYAAN RIYOO BARANAA – OLOMPIYAA OROMOOTI: Taammanaa Bitimaa irraa- Dubbifamuu kan qabudha! – Beekan Guluma Erena
OLOMPIYAAN RIYOO BARANAA – OLOMPIYAA OROMOOTI: Taammanaa Bitimaa irraa- Dubbifamuu kan qabudha!	Beekan Erena
Education August 26, 2016OROMO
168SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
As irratti waan beekamuu qabu tokkotu jira. Oromoonni akkanatti karaa atileetikaatiin kan beekamuu dandayaniif jedhamee yoo gaafiin waayii ka’e, waayee aadaa Oromoo beekamaa saniitu dursee ka’a. Aadaa Oromoo keessatti akaakuuwwan ispoortii baay’eetu argama. Kanneen keessaa: gugsii (farda yaabbii), siillee (ulee fi eeboo darbannaa), waldhaansoo, utaalchoo fi fiigicha fayi. Oromoonni otoo akkanatti Toopphiyaa tana beeksisaa jaranuu miidhaa fi roorroon isaan irra gayu danuu dha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne, Abbabaa Biqilaa namni akkasitti addunyaa guutuutti beekamee fi isaan beeksisu dhukkubsatee, waldhaansallee dhabuun booda boqote. Maammoo Waldee mana hidhaa warra Wayyaanee keessa otoo jiruuti du’e. Dhaabbanni atileetika Toopphiyaa Oromoonni afaan ofiitinillee akka walitti hin haasofneef dhiibbaa fi miiddhaa irratti gochaa ture; ammallee ittuma jira. Barana immoo Wayyaaneen ijuma nyaachuun akka Oromoonni beekamoon garaa Biraazil dhaqanii hin hirmanne goote. Nama biraa dhiisitii Qananiisaa Baqqalaayyuu ni dhoorkite. Egaa, Fayyisaa Leellisaa middhaa akkanaa keessa kutee dabruun geeba maaratooniis fudhatee, hasxaa fincila diddaa gabrummaa olkaasee agarsiisuun Oromoo fi Oromiyaa teenya addunyaatti agarsiise. Ammaan tana qabsoon bilisummaa Oromoo karaalee addaddaatiin itti-fufaa jira. Amma alaa-manaa tokkummaa keenya kana ammaa caalaa cimsachaa, ijaaramnee wal-ijaaraa, hidhannee wal-hidhachiisaa garuma fuuldaraatti tarkaanfachuu malee filmaata biraa tokkollee hin qabnu. Yeroon uummanni Oromoobirmadummaa isaa gonfatu, yeroon sabni Oromoo bilisummaa isaa uffatu, yeroon Oromiyaan teena walabummaa ishii dhuunfattu fagoo miti! Mee Waaqni fi ayyaanni Oromoo umurii dheeraa fi jaalala Oromoo, Fayyisaaa Leellisaaa ilma leellifamaa kana nuuf haa badhaasu!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa168SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← FAYIDAA GUYYUU KITAABA DUBBISUUN SIIF KENNU KESSA KUDHANAN
TARKAANFIIWWAN GURGUDDOO GAMA DINAGDEETIIN MOOTUMMAA WAYYAANEERRATTI FUDHATAMUUF JIRAN AFAAN SADANIIN SINIIF DHIHEESSINA; Waliif daddabarsaati kan hindhageenye mara gurra buusa!! MOOTUMMAAN WAYYAANEE BARA KANA GALAGALTI!!! →